အိုမူအာမူအာ - ဝီကီပီးဒီးယား
Interstellar comet 'Oumuamua exits the Solar System (artist concept) (animation)
/oʊˈmuːəˈmuːə/ ( နားဆင်)
Epoch2November 2017 (JD 2458059.5)
7000127980000000000♠1.2798±0.0008 AU[Note ၁]
0.0959 AU ၊ 37.3 LD
19.7 to >27.5[Note ၂]
အိုမူအာမူအာ (အင်္ဂလိပ်: ʻOumuamua) သည် အလယ်အလတ်အဆင့် တက်ကြွသော ကြယ်တံခွန် ဖြစ်ပြီး မိမိတို့ သိထားသည့် နေအဖွဲ့အစည်းမှ ပထမဆုံး ထွက်ခွာသွားမည့် ကြယ်တာရာကြားခံ အရာဝတ္ထု (interstellar object) ဖြစ်သည်။ ယင်းအား Robert Weryk ဆိုသူက ဟာဝိုင်အီရှိ Pan-STARRS တယ်လီစကုပ်ဖြင့် ၂၀၁၇ အောက်တိုဘာ ၁၉ တွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ပထမဆုံး မြင်တွေ့ချိန်၌ ယင်းသည် ကမ္ဘာမြေမှ ၃၃,၀၀၀,၀၀၀ ကီလိုမီတာ (၂၁,၀၀၀,၀၀၀ မိုင်) ကွာဝေးလျက်ရှိပြီး နေမှ ဝေးရာအရပ်သို့ ဦးတည်လျက် ရှိနေခဲ့သည်။
အိုမူအာမူအာသည် ခန့်မှန်းခြေ (၈၀၀ × ၁၀၀ ပေ) ရှိပြီး နေအဖွဲ့အစည်းအပြင်ဘက်တွင် တွေ့ရသော အရာဝတ္ထုများကဲ့သို့ အရောင်မှာ နက်နီရောင် ရှိသည်။ အိုမူအာမူအာသည် နေအနီးသို့ ဖြတ်သွားသော်လည်း ကြယ်တံခွန်အမြီးတန်းကို မတွေ့ရပေ။ အိုမူအာမူအာသည် သတ္တုပါဝင်မှု ကြွယ်ဝပြီး သိပ်သည်းမှုလည်း များမည်ဟု ယူဆထားသည်။ နေကို တူရုပြု၍ အလွန်လျင်မြန်စွာ ရွေ့လျားသောကြောင့် နေအဖွဲ့အစည်းရှိ အိုမူအာမူအာ၏ ရင်းမြစ်နေရာအား ခြေရာခံရန် အခွင့်ရေး မရှိသကဲ့သို့ နေအဖွဲ့အစည်းရှိ ပတ်လမ်းဖြင့် စောင့်ဖမ်း၍လည်း မရနိုင်ပေ။ ယင်းကြောင့် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ နေအဖွဲ့အစည်းအပြင်ဘက်သို့ ထွက်ခွာသွားမည်ဖြစ်သည်။ အိုမူအာမူအာ၏ ကြယ်စနစ်နှင့် ကြယ်များကြား ဖြတ်သန်းခဲ့သည့်အချိန်များကိုမူ မသိရပေ။
↑ Small Asteroid or Comet 'Visits' from Beyond the Solar System။ NASA (26 October 2017)။
↑ ၂.၀ ၂.၁ MPEC 2017-U181: COMET C/2017 U1 (PANSTARRS)။ International Astronomical Union (25 October 2017)။ (CK17U010)
↑ ၃.၀ ၃.၁ MPEC 2017-V17 : NEW DESIGNATION SCHEME FOR INTERSTELLAR OBJECTS။ International Astronomical Union (6 November 2017)။
↑ MPEC 2017-U183: A/2017 U1။ International Astronomical Union (25 October 2017)။ (AK17U010)
↑ A/2017 U1, first interstellar asteroid ever detected!။
↑ ၆.၀ ၆.၁ ၆.၂ JPL Small-Body Database Browser: ʻOumuamua (A/2017 U1)။ Jet Propulsion Laboratory။
JPL 1 (Solution date: 2017-Oct-24) Archived 25 October 2017 at the Wayback Machine.
JPL 10 (Solution date: 2017-Nov-03) Archived7November 2017 at the Wayback Machine.
↑ ၇.၀ ၇.၁ Pseudo-MPEC for A/2017 U1 (FAQ File)။ Bill Gray of Project Pluto (26 October 2017)။ (Orbital elements)
↑ ၈.၀ ၈.၁ ၈.၂ ၈.၃ ၈.၄ "Interstellar Interloper 1I/2017 U1: Observations from the NOT and WIYN Telescopes" (30 November 2017). The Astrophysical Journal Letters 850 (2): L36. doi:10.3847/2041-8213/aa9b2f. Bibcode: 2017ApJ...850L..36J.
↑ "A Familiar-Looking Messenger from Another Solar System" (သတင်းထုတ်ပြန်ချက်)။ National Optical Astronomy Observatory။ 15 November 2017။ NOAO 17-06။ 15 November 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "The tumbling rotational state of 1I/‘Oumuamua" (2018-02-09). Nature Astronomy. doi:10.1038/s41550-018-0398-z. Bibcode: 2018NatAs...2..383F.
↑ Bolin, B. T. (2017). "APO Time Resolved Color Photometry of Highly-Elongated Interstellar Object 1I/ʻOumuamua". The Astrophysical Journal 852: L2. doi:10.3847/2041-8213/aaa0c9. Bibcode: 2018ApJ...852L...2B.
↑ ၁၂.၀ ၁၂.၁ ၁၂.၂ ၁၂.၃ ၁၂.၄ "Col-OSSOS: Colors of the Interstellar Planetesimal 1I/2017 U1 in Context with the Solar System" (2017). The Astrophysical Journal 851 (2): L38. doi:10.3847/2041-8213/aaa07c. Bibcode: 2017ApJ...851L..38B. “As its albedo is unknown, we do not describe 1I/‘Oumuamua as consistent with Tholen (1984) P type.”
↑ "ʻOumuamua asamessenger from the Local Association" (23 November 2017). The Astrophysical Journal 852 (2): L27. doi:10.3847/2041-8213/aaa404. Bibcode: 2018ApJ...852L..27F.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အိုမူအာမူအာ&oldid=413089" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၂ ဇူလိုင် ၂၀၁၈၊ ၀၈:၀၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။